Baaritaan Amni iyo dib u habeyn lagu sameeyay Shaqaalaha Gobolka Banaadir iyo Dowladda Hoose ee Xamar | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Baaritaan Amni iyo dib u habeyn lagu sameeyay Shaqaalaha Gobolka Banaadir iyo...
Aqalka Dowladda Hoose ee Xamar waxaa maanta qabtay shir looga hadlayay Amniga Caasimadda iyo baaris lagu sameeyay Shaqaalaha Maamulka Gobolka Banaadir iyo kuwa Xarunta.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho oo shir gudoomiyay kulanka waxaa ka qaybgalay ku xigeenadiisa iyo howlwadeenada Dowladda hoose ee Xamar.
Agaasinka guud ee Amniga Caasimadda ee Maamulka Gobolka Banaadir waxa uu soo bandhigay dib u habeyn lagu sameeyay howlaha Aqalka Dowladda Hoose iyo Gobolka.
Guddoomiye ku Xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobalka Banaadir Maxamed Cabdullaahi (Tuulaax) ayaa sheegay in dib u habeyntan lagu sameeyay dhammaan shaqaalaha Maamulka Gobalka Banaadir iyo dowladda Hoose ee Xamar ay tahay tii ugu horreysay ee nooceeda ah oo ay sameeso Hay’ad dowli ah oo katirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dib u habeyntan ayaa timid kaddib qaraxii ka dhacay Aqalka Dowladda hoose 24-kii Luuliyo 2019-kii, waxaana qaraxaas ku dhintay mas’uuliyiin katirsanaa Maamulka Gobolka sida Agaasimaha howlaha guud ee Gobolka, Gudoomiyaal Degmo iyo Howlwadeeno kale.
Waxaana ku dhaawacmay qaraxaas Mas’uuliyiin uu ugu xil sareeyay Gudoomiyihii Gobolka Banaadir iyo Duqii Muqdisho AUN Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) oo dhaawaca soo gaaray u geeriyooday 1-dii Agoosto isla sanadkaas.
Hay’adaha Amniga waxa ay sheegeen in Qaraxaas ay fulisay Haweeney katirsaneen Maamulka Gobolka, waxaana dhawaan la xukumay Agaasime kale oo la sheegay in uu katirsanaa Al-Shabaab isla markaana aanu soo marin baarista.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaa amray in dib u habeyntan shaqaalaha lagu sameeyay ay u gudubto wajiga labaad oo ah mid joogto ah si loo xaqjiiyo Amniga xarumaha Maamulka Gobalka Banaadir.
Previous articleAFRICOM iyo DFS oo War kasoo saaray duqeyn ay ka geysteen Degmada Jilib ee Gobolka Jubada Dhexe.
Next articleShirkad diyaaradeed oo laga leeyahay Kenya ayaa ku dhawaaqday in ay joojisay duulimaadyadeeda Muqdisho.